Home Parenting ပိုပျော်ရွှင်ရသော ပိုကောင်းသော မေမေတို့ဖြစ်စေဖို့ မေမေတို့အတွက် Challenge (၈) ခု
ပျိုးထောင်ရခြင်းဟာ လူတိုင်းအတွက် ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်ရခြင်းက အခက်အခဲဆုံးပါပဲ။ ဘယ်လိုမိခင်မှာမဆို အရမ်းခက်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေဆိုတာ ကြုံတွေ့ရစမြဲပါပဲ။ တစ်ခါတလေမှာ ရူးသွားချင်လောက်အောင် ခက်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေလည်း ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ ဒါ့ပေမယ့် ဒီ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကို ကြုံတွေ့လာရစေဖို့ ဒီ Challenge လေးကို အတူပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ ပိုပျော်ရွှင်ရစေဖို့၊ ပိုကောင်းလာစေဖို့က ဒီအချက်လေးတွေက တကယ်လိုအပ်ပါတယ်နော်…။
၁။ အသံကျယ်ကျယ်မအော်မိခင်မှာ အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ
ကလေးကို အော်ဟစ်ဆူပူပြီးနောက်မှာ အပြစ်ရှိနေသူတစ်ယောက်လိုအမြဲခံစားနေရလား? ဒါမှမဟုတ် သင့်အနေနဲ့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံသင့်တယ်လို့ တွေးမိနေလား? ဒါဆိုရင် နံပါတ်တစ် Challenge ကို လုပ်ပါ။ အသက်ရှူနေစဉ်မှာ ဒီခံစားချက်တွေက ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ ဒီလိုအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ဒီခံစားချက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ တစ်ခါတရံမှာ သင်လိုအပ်တာက စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သင့်စိတ်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ပြန်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရက် (၃၀) နော် မေမေတို့…။
၂။ မနက်ခင်းစီတိုင်းမှာ ကလေးငယ်တွေကို နှုတ်ဆက်ပေးပါ
ကလေးငယ်တွေနှိုးထလာတဲ့အခါ သူတို့ပထမဦးဆုံးကြားချင်တဲ့အရာက ကောင်းမွန်တဲ့စကားတစ်ခွန်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ – Good Morning , အိပ်လို့ကောင်းရဲ့လား? (သို့) မေမေ သား/သမီးကို ချစ်တယ်၊ မနက်စာစားတော့မလား? သူတို့ရဲ့ မနက်ခင်းကို သူတို့ရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးလေးတွေနဲ့ စတင်နိုင်ဖို့ မေမေတို့က ကူညီပေးပါ။
၃။ ကောင်းမွန်တဲ့ အမှတ်တရတစ်ခုဖြင့် သူတို့ရဲ့ နေ့ရက်ကို အဆုံးသတ်ပါ
ကလေးငယ်တွေ အိပ်ရာထဲမသွားခင်မှာ ညတိုင်းသူတို့ရဲ့ မျက်လုံးထဲကြည့်ပြီး သူတို့ကို ချစ်မြတ်နိုးကြောင်းပြောပါ။ ဒီနေ့မှာ ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါ။ တကယ်လို့ သူတို့က မကောင်းဘူးဆိုရင် နောက်နေ့မှာ ပိုကောင်းလာစေလိုကြောင်းပြောပြီး ဒီနေ့ညကို ကောင်းကောင်းအိပ်ဖို့ ပြောပါ။
၄။ ကလေးတစ်ဦးစီနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီပြုလုပ်ပေးပါ
သင်တို့တွေ စာဖတ်နိုင်တယ်၊ တစ်ခုခုချက်ပြုတ်နိုင်တယ်၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ကားလောက်ကြည့်နိုင်သလို ပွေ့ဖက်တာမျိုးလေးတွေအထိ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်နှင့် သင့်ကလေးတစ်ဦးချင်းစီအကြားက သံယောဇဉ်ကြိုးတွေခိုင်မြဲလာစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့ ကလေးတိုင်းက ”မေမေနှင့် ကျွန်မ/ကျွန်တော်” ဆိုတဲ့ အချိန်တစ်ချို့လိုအပ်ပါတယ်။
၅။ သူတို့လုပ်သမျှ ကောင်းမွန်တဲ့အရာရာတိုင်းအတွက် ကောင်းကောင်းကျေးဇူးတင်ပေးပါ
အချိန်တိုင်းမှာ သူတို့ကို တစ်ခုခုပြုလုပ်ဖို့ ပြောပါ။ သူတို့နားထောင်တဲ့အကြိမ်တိုင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းပြောပါ။ သူတို့ဟာ ဘယ်လောက်တောင်ကြီးမားတဲ့ ကူညီသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူတို့သိပါစေ။ သူတို့ကိုဂုဏ်ယူကြောင်း သူတို့သိအောင်ပြောပြပါ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့လည်း ဂုဏ်ယူသင့်ကြောင်း သူတို့ကို သိအောင်လုပ်ပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရေးသားတဲ့ ဂျာနယ်တစ်ခုကို စတင်ပါ။ သင့်ကလေးတွေကို ကျေးဇူးတင်မိတဲ့ သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာအကြောင်း တစ်ခုခုထည့်ရေးပါ။
၆။ သင့်အတွက်နှင့် ကလေးငယ်တွေအတွက် နည်းပညာအသုံးပြုခြင်းကို လျှော့ချပါ
နည်းပညာဟာ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ကို ကောင်းကောင်းလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကို ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတာတွေ၊ TV ကြည့်နေတာတွေကို လျှော့ချချင်တယ်ဆိုရင် မေမေတို့က ဦးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ တတ်နိုင်သမျှ မလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ဒီနည်းပညာပစ္စည်းတွေကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ သင့်ကိုယ်သင်စိန်ခေါ်ပါ။
၇။ နားထောင်ပါ၊ စစ်မှန်သော နားထောင်နည်းနဲ့ နားထောင်ပါ
သူတို့က သင့်ကို တစ်စုံတစ်ရာပြောဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် သင်လုပ်နေတဲ့အရာကို ရပ်တန့်ပါ။ ပြီးရင် သူတို့မျက်လုံးတွေကို ကြည့်ပါ၊ ပြီးရင် နားထောင်ပါ။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာပုံပြင်တိုင်းကို မေးခွန်းတွေဖြေပြီး စိတ်ဝင်စားကြောင်း ပြပါ။ ဟုတ်ပါတယ် တစ်ခါတလေမှာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ မေးခွန်းတွေက ကြောင်တောင်တောင်တွေဖြစ်နေတတ်ပြီး သူမဖြေနိုင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ့အခါ ဒီလိုစကားလုံးမျိုးကို ပြောပါ။ ”အဲ့ဒီ့အဖြေကို မေမေသေသေချာချာ မသိဘူး၊ အတူတူအဖြေရှာကြမလား” ဆိုတာမျိုးအဖြေပေးပါ။
၈။ လိုအပ်ရင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ပါ။ သို့ပေမယ့် မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပါ
ကလေးငယ်က သူ့ရဲ့ အစ်မကို ရိုက်လိုက်တဲ့အခါ ပုံမှန်ထက် အချိန်ကြာကြာထိုင်ခိုင်းပါ (အန္တရာယ်မရှိသောနည်းလမ်းဖြင့်) ။ ပြီးရင် ဒီလိုဘာကြောင့်ထိုင်ရတယ်ဆိုတာကို ပြောပြဖို့ ကြိုးစားပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်ဒီလိုမလုပ်ဖို့ သေချာပြီလားဆိုတာမျိုး မေးပါ။ မေမေတို့အနေနဲ့ ကလေးငယ် ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ သိပါစေ။ သူတို့ကို သင်ဘာလုပ်စေချင်ကြောင်း ပြောပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲပြောပြပါ။ ငြိမ်သက်နေမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Previous articleမေမေတို့ရဲ့ ဘေဘီလေးနှင့်အတူ ကခုန်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
Next articleအလွန်အမင်းကာကွယ်ပေးသော မိခင်တွေရဲ့အမူအကျင့် (၈)ခု
မေမေတို့ရဲ့ ကလေးမှာ စိတ်ခံစားမှုမလုံခြုံခြင်းကို ကုစားနိုင်မယ့် အဆင့်(၆) ဆင့်
စိတ်ခံစားချက် မရင့်ကျက်တဲ့ မိဘတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ လက္ခဏာ (၇)ချက်
ကလေးတွေကို Narccissistsတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သော မိဘအုပ်ထိန်းမှုဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် (၈)ချက်